सिलिगुढीबाट सन्दकपुरसम्म साहसिक मोटरसाइकल यात्रा - Nayabulanda.com
सिलिगुढीबाट सन्दकपुरसम्म साहसिक मोटरसाइकल यात्रा
नयाँ बुलन्द २४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १९:३८ 359 पटक हेरिएको
इलाम : पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने उदेश्यले भारतको सिलिगुडीबाट झापाको काँकडभिट्टा हुँदै इलामको सन्दकपुरसम्म साहसिक मोटरसाइकल यात्रा गरिने भएको हो ।
मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्दन विकास समिति इलामको संयोजनमा मोटरसाइकल यात्रा हुने भएको हो । यात्रामा भारतका १८ र नेपालका ७ जना टुर अपरेटर सहभागी हुनेछन् ।
जेठ २५ बिहान भारतको सिलिगुडीबाट सु? हुने यात्रा दिउँसो ११ वजे झापाको काँकडभिट्टा हुँदै इलामतर्फ प्रवेश गर्नेछ । नेपालतर्फ झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको काँकडभिट्टाबाट सु? हुने मोटरसाइकल यात्रा बाहुनडाँगी, कृष्ण थुम्की, बहुबन, कमेरे पहाड, बुधबारेको हाफपाइन्ट चोक हुँदै मेची राजमार्ग निस्केर इलामको रोङ गाउँपालिकाको कुुटीडाँडा, कन्याम माइखोला हुँदै इलाम आएर बास बस्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यस्तै २६ गते इलाम सदरमुकामबाट बिब्ल्याँटे हुँदै सन्दकपुर गाउँपालिकाको सुलुबुङ हुँदै जमुनाको ढापपोखरीमा गएर साँस्कृतिक झाँकी सहितको कार्यक्रममा सहभागी भएर तिनकुनेमा गएर बस्ने कार्यक्रम तय भएको मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक केशव द्यौरालीले जानकारी दिए ।
२७ गते बिहान रेडपाण्डाको बासस्थान मानिएको तिनकुने क्षेत्रमा रेडपाण्डाको विषयमा छलफल र रेडपाण्डा नियाल्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै सो दिन ३ हजार ६ सय ३६ फिटर उचाइमा रहेको सन्दकपुर गएर बासबस्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यहाँ २८ गते सो क्षेत्रको विकास, स्थानीयको जिवनशैली लगायतका विषयमा चर्चा गरिने बताइएको छ । त्यसपछि माईपोखरी, पुवाखोला, हुँदै देउमाई नगरपालिकाको कुइभिर नियाल्दै मंगलबारे बजारमा गएर बास बस्ने कार्यक्रम तय भएको कार्यकारी निर्देशक द्यौरालीले वताए ।
२९ गते मंगलबारेको पर्यटकीय क्षेत्र पानीटारको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै सूर्याेदय र सूर्योस्तको दृष्य अवलोकनका लागि प्रख्यात मानिएको सिद्धिथुम्का जाने र त्यस मुनी माइखोलामा गएर फिसिङ गर्ने कार्यक्रम तयार गरिएको बताइएको छ । त्यसपछि माई नगरपालिकाको सुखानी हुँदै झापाको अर्जुनधारा मन्दिर र सालबाडी हुँदै झापाको काकडभिट्टामा पुगेर टोलीलाई विदाई गरिने निर्देशक द्यौरालीले जानकारी दिए ।
मोटरसाइकल विग्रीएमा मर्मत गर्न मर्मत टोली, औषधिउपचारको टोली सहित अन्य ब्यवस्थापनको टोली समेत यात्रामा सहभागी हुने जनाइएको छ । यात्रामा सहभागी मोटरसाइकल सबै बुलेट बाइक हुने छन् । कार्यक्रममा झापाको मेचीनगर नगरपालिका इलामको देउमाई, इलाम, माई र सूर्योदय नगरपालिकाले सहयोग गर्ने छन् । त्यस्तै इलामको रोङ गाउँपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाले सहयोग गरेको वताइएको छ ।
मुख्यतय नेपालको सन्दकपुर देखाएर भारतले पैसा कमाई रहेकाले इलामको बाटो पनि सन्दकपुर पुग्न सहज छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो कार्यक्रम तय गरिएको जनाईएको छ ।
सन्दकपुर जान भारतको बाटो प्रयोग गरिने र भारततर्फ नै बास बस्ने भएकाले भारतले नै पैसा कमाउने गरेको भन्दै यस किकिमको कार्यक्रम तय गरिएको कार्यकारी निर्देशक द्यौरालीले वताए । यस क्षेत्रमा वार्षिक ८० हजार वढि पर्यटक आउने तर सवै भारतको बाटो भएर आउने भएकाले पनि समस्या भइरहेको वताइएको छ ।
यस्तो कार्यक्रम नेपालमा नै पहिलो पटक भएको भन्दै स्थानीय पनि खुसी भएका छन् ।